ခွင့်လွှတ်တယ် ဆိုတာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on January 25, 2013 at 8:10am
တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြမယ်။ ဒါက အမေရိကမှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒကာမကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးကို လူတစ်ယောက်က သတ်လိုက်တယ်။ သူ့ မှာ ဒီသမီးတစ်ယောက်ထဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ချစ်စရာရှိတာနော်။ အဲဒီသမီး အသတ်ခံလိုက်ရတော့ အဲဒီ ဒကာမကြီးမှာ အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲ ရတယ်။ သူ့ ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုက ဘယ်လိုမှ အစားထိုးလို့ မရနိုင်တော့ဘူး။ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာက ပြန်ရှာရင်ရနိုင်သေးတယ်။ သမီးအသတ်ခံရတာ ဘယ်လိုမှ ပြန်အစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူး။
အဲဒီဒကာမကြီးက ပညာလည်းတတ် ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတဲ့ သူဖြစ်တယ်။ သူကရှေ့နေကောင်းကောင်းဌားပြီးတော့ သူ့ သမီးကို သတ်တဲ့သူကို သေဒဏ်အပြစ်ပေးအောင် တရားရုံးမှာစွဲချက်တင်တယ်။ အဲဒီပြည်နယ်မှာ သေဒဏ်အပြစ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အလွန်ဆုံး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ပဲ ရှိတယ်။ သတ်တဲ့သူဟာ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဒကာမကြီးဟာ ဘယ်လိုမှ မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ သူ့ သမီးကို သတ်တဲ့သူသေမှပဲ သူကျေနပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားသေးတယ်။ ဒီလိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့ စိတ်နဲ့ နေလာလိုက်တာ ၁၈ နှစ်ကြာတယ်။ တစ်ခြားကိစ္စတွေကို သူကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကို သူနားလည်လာတယ်။ အသက်လည်းကြီးလာပြီနော်။ ၁၈ နှစ်တောင်ကြာသွားပြီ။ ဘ၀အတွေ့ အကြုံလည်းများပြီ။ တရားသဘောတွေ သဘောပေါက်လာတယ်။ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ ထောင်ထဲကိုသွားပြီး တော့ အဲဒီ သတ်တဲ့လူနဲ့ တွေ့ တယ်။
တွေ့ ပြီးတော့ "နင့်ကို ငါ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်" လို့ တစ်ကယ်စိတ်ပါလက်ပါ ပြောလိုက်တယ်။ တစ်ကယ်ကျေကျေနပ်နပ် ပြောလိုက်တာ။ ပြောလိုက်တော့ အဲဒီအချိန်ကျမှ သတ်တဲ့သူကလည်း ၀မ်းနည်းပြီးတော့ ငိုတော့တာပဲ။ သူ စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောတယ်။ သူလည်း လုပ်တုန်းက လုပ်ခဲ့ပြီးပြီနော်။ အခု ၁၈ နှစ်လောက်ကြာတော့ သူလည်းပဲ ဒုက္ခတော်တော်ရောက်ပါပြီ။ သူ့ ဘ၀တစ်သက်လုံး ထောင်ထဲမှာ နေရတော့မှာ။
တစ်ဖက်က ခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့ ပြောတော့မှ လုပ်ခဲ့တဲ့သူကလည်း မှားပါတယ် ၊ သူစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီဒကာမကြီးက နောက်တော့ ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်အထိ သူတစ်ရက်မှ စိတ်မငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူးတဲ့။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါသေးတဲ့အချိန်ထိ တစ်နေ့ မှ သူစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရခဲ့ပါဘူး။ ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ သူ့ စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားပြီ။ လွတ်လပ်သွားပြီတဲ့။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘ၀ကိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာ သူစဉ်းစားပြီတဲ့။ ဒါကြောင့် ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီလောက်အထိအရေးကြီးတယ်။
ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခ ၊ ကိုယ့်နှလုံး ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ နာကြည်းမှု ၊ ပူဆွေးမှု ၊ သောက ၊ ဒေါမနဿ ၊ မခံချင်စိတ် ၊ လက်စားချေချင်စိတ်တွေ ၊ အဲဒါတွေကို သက်သာမှုရအောင် လုပ်လိုက်တာ။ ဘယ်သူသက်သာမှု ရအောင်လုပ်တာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်သက်သာမှုရအောင် ကိုယ်လုပ်လိုက်တာပါ။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုသက်သာမှုရအောင် ကိုယ်လုပ်လိုက်တာပါနော်။
ကိုယ့်စိတ်ကို ဒီမုန်းတီးမှု ၊ နာကြည်းမှု ၊ ကလဲ့စားချေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက နှောင်ဖွဲ့ ထားတာကို လွှတ်လိုက်တာပဲ။ ဘယ်သူ့ ကိုအနှောင်အဖွဲ့ က လွှတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို အနှောင့်အဖွဲ့ က လွှတ်လိုက်တာပါ။ အဲဒါကို နက်နက်နဲနဲစဉ်းစားပါ။
သူများအပေါ်မှာ နာကြည်းနေရတာ ၊ သူတစ်ပါးကို လက်စားချေမယ်လို့ တွေးနေရတာတွေဟာ အမှန်တော့ကိုယ့်ဘ၀ကို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ကိုယ်တစ်ကယ် လုပ်သင့်တဲ့ ၊ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ကိစ္စတွေကို လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကို လွတ်လပ်မှုပေးလိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ငြိမ်းချမ်းခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်အကျိုးကို လုပ်လိုက်တာပါ။ သူများအကျိုးပါချင်လည်း ပါမယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်လွန်းလို့ အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ သူတို့ ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် ကိုယ်ပဲ ခံနေရတာပဲနော်။
ပြီးတော့ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်က အထက်စီးနေရာကနေပြီးတော့ မင်းကို ငါခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ဖက်သားကို အနိုင်ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကို အနိုင်ယူလိုက်တဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့ လုပ်လို့ မရဘူး။ သူက လူဆိုး ၊ သူက မတရားတာကိုလုပ်တာ ၊ သူက သူတော်ကောင်းစိတ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါက သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သူ့ ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ( one up တစ်ဆင့်မြင့် ) မာနစိတ်နဲ့ ခွင့်လွှတ်လို့ မရဘူး။ အဲဒီလို စိတ်မျိုးဟာ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူး။ မာနကြီးတဲ့သူဟာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး။
အပြစ်မရှိတဲ့သူကို အပြစ်တင်ပြီးမှ ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလည်း တစ်ကယ်တော့ ခွင့်လွှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲ။ စေတနာဆိုးနဲ့ သူတစ်ပါးကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာ သူ့ မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ အကုသိုလ်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က ပျောက်အောင်လုပ်ပေးလို့ မရဘူး။ You cannot escape from your kamma. ကိုယ့်ကံကို ကိုယ်လွတ်အောင် ပြေးလို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က သူ့ ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့ အကုသိုလ်ကိုပျောက်အောင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ နာကြည်းနေတာကိုပဲ ပျောက်အောင်လုပ်လိုက်တာ။
ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ အနိုင်ယူလိုက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အရှုံးပေးလိုက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အထက်စီးကနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အောက်ကျို့ တာလည်း မဟုတ်ဘူး။
Forgiveness is freeing up and putting to better use the energy once consumed by holding grudges , harboring resentments and nursing unhealed wounds.
ရန်ငြိုးဖွဲ့ နေရတာ ၊ မုန်းတီးနေရတာ ၊ မကျက်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကို ပြုစုနေရတာနဲ့ ကုန်နေရတဲ့ အင်အားတွေကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် လွတ်လပ်အောင် လုပ်လိုက်တာဟာ ခွင့်လွှတ်တာပဲ။
ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ။ ရန်ငြိုးထားနေရတာ စိတ်မလွတ်လပ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကို တစ်ခြားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်မရဘူး။ နာကြည်းနေရတာ ၊ စိတ်ဆိုးနေရတာ ၊ အနာဟောင်းလေးကို ပြန်ပြီးတော့ အနာသစ်ဖြစ်အောင် အနာဖေးခွာနေရတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားနဲ့ အချိန်တွေအလကားဖြစ်သွားစေတယ်။
အဲဒီလို နာကြည်းနေရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ ၊ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေ ၊ အချိန်တွေကုန်မယ့်အစား အဲဒီအချိန်နဲ့ အင်အားကို ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း အကျိုးများအောင် အနာဂတ်မှာလည်း အကျိုးများအောင် ကောင်းတဲ့ကိစ္စ တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့အသုံးချချင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ ကိုခွင့်လွှတ်တာ။
Forgiveness is an internal process. It happens within us.
ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာ အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စဉ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။
လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး ၊ စိတ်ဆိုးနေတယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီစိတ်ကိုသေသေချာချာကြည့်နေပါ။ စိတ်ထဲမှာ သူ့ ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်မယ် ၊ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ် ၊ သူဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမယ် စတဲ့အတွေးတွေ ခဏခဏပေါ်နေမယ်။ တော်ကြာရင် ပြန်ပေါ်လာပြီး ခဏလောက်မေ့နေပြီးတော့ ဒီအကြောင်းသတိရပြန်ပြီး ပြန်တွေးနေမိပြန်ပြီ။
အဲဒီလိုတွေးနေတာကို သေသေချာချာကြည့်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။ တင်းကျပ်နေတယ်။ ပင်ပန်းနေတယ်။ ဆင်းရဲနေတယ်။ ခေါင်းတွေ ပူနေတယ်။ ရင်တွေပူနေတယ်။ သူ့ ကိုမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေနိုင်တဲ့အခါ သက်သာတယ်။ တော်ကြာ သတိရပြန်ရင် တွေးပြန်တယ်။ အဲဒီအတွေးကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။ ရင်ပူတယ်။ ပင်ပန်းတယ်။ နွမ်းနယ်တယ်။ အဲဒီလို ကြည့်ဖန်များလာတဲ့အခါ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သတိအားကောင်းလာလို့ တည့်တည့်မြင်ရင် သူ့ သဘောသူဆောင်တဲ့စိတ်ပဲဆိုတာ သိလာတယ်။ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပဲဆိုတာသိလာတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပင်ပန်းခံနေတယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ချိန်မှာ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကို ရသွားတယ်ဆိုပါတော့။
အဲဒီသူ့ အပေါ်မှာ နာကြည်းနေတဲ့စိတ် ၊ မကျေနပ်တဲ့စိတ် ၊ လက်စားချေချင်တဲ့စိတ် မရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့ ၊ အဲဒီလိုစိတ်မရှိတော့တဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေသလဲ။ နေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်နော်။ နေရတာ တော်တော်သက်သာသွားတယ်နေ။
It isafeeling of wellness, freedom and acceptance.
ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာ နေလို့ ကောင်းတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင် နေလို့ ကောင်းတယ်။ လွတ်လပ်သွားတယ်။ လက်ခံနိုင်သွားတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို လက်ခံနိုင်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် အကယ်၍စိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်မသွားဘူး ၊ စိတ်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းမသွားဘူး ၊ ဒီကိစ္စကို ထပ်ခါတစ်လဲလဲတွေးနေသေးတယ်ဆိုရင် ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးလို့ ပဲ။
ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က သူ့ ကိုနာကြည်းနေရတာကို ငါလုပ်နေဖို့ မလိုတော့ဘူး။ အဲဒါ ငါ့အတွက် မလိုအပ်တော့ဘူး။ အဲဒါ ငါ့အတွက် အသုံးမကျတော့ဘူး ၊ အကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ သိသွားတာ။
( ဆရာတော်ဦးဇောတိက - "သိက္ခာရှိရှိနေမယ် ၊ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်" )